Farriin ku socota xisbiyada qaranka Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan
Farriin ku socota xisbiyada qaranka Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan 0 Friday 30th December, 2016 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Dhexe Visits: 110
Farriin ku socota xisbiyada qaranka
Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan
Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan Maalmahan waxa xoogaystay dagaalka afka ah ee ay xisbiyadu isku qaadayaan iyo borobagaandhada siyaasiga ah ee la isku marinayo warbaahintaee la socota xummadda doorashada. Xilligan oo doorashadii madaxtooyadu kaabiga innagu soo hayso maaha wax lala yaabo in madaxda qaar ay ka soo yeedhaan hadallo xanaf leh oo dadka qaybin kara. Xisbiyadeenu maanta way ka siman yihiin hadalladaa aan ka fiirsiga lahayn laakiin qaarkood ayaa u eg in ay ku talax tagayaan. Gaar ahaan maan jeclaysan in xisbiga Waddani madaxdiisu ay marar dhawr ah shacbiga xasuusiyaan dagaalkii sokeeye. Waxan jecelahay in aan xisbiyada xasuusiyo in fursadda ay maanta ku tartamayaan ay ku heleen nabadda iyo horumarka ka jira Somaliland sidaas daraadeed aan looga fadhiyin in ay dadka ugu abaal gudaan ereyo nabadda dhaawacaya. Tartanka quruxdiisu waxay ku jirtaa in xisbi waliba barnaamijkiisa soo bandhigo, dadkana tuso sida uu uga maamul fiicnaan karo xisbiyada kale.
Dalkeenu maanta wuxu u baahan yahay in la sii adkeeyo oo laga jiro wax kasta oo ku keeni kara in uu xagal daaco. Nabadda iyo wanaagga Somaliland ka jira kuma iman dhayal. Dad badan ayaa naftoodii iyo maalkoodii ku waayey, carruuro badanina way ku agoontoobeen. Dedaal hore ayaynu maanta midhihiisii guranaynaa dusheenana waxa ka babanaya calan tawxiidku ku qoran yahay.
Waxaynu nahay qaran adduunka tusay kartidiisa iyo isku-filnaanshihiisa, qaran shaqo badan qabsaday iyadoo aan cidina wax la qaban. Diyaar baynu u nahay qabyooyinka inoo dhiman in aan waxqabadkooda sii wadno. Qabyooyinkaa waxa ugu weyn in aynu helno aqoonsi. Sidaan dhowr jeer ku qoray maqaallo hore, marka aynu dhexdeena is ictiraafno ee aynu noqono ummad dawladnimo u diyaar ah aqoonsiga caalamiga ah ee aynu u qalanno waynu helaynaa. Waxaynu u baahan nahay in aynu sii wadno dedaalka, wadajirka iyo danta guudna oo aynu u midowno. Siyaasaddu maaha in xisbi waliba dantiisa gaar u jirto danta guudna daaqadda ka tuuro.
Saxaafadda Somaliland oo aan ogahay in ay duruufo adag ku shaqeeyaan waxan u soo jeedin lahaa in ay qayb ka noqdaan quruxda tartanka. Muddo 35 sanno ah ayaan suxufi soo ahaa. Umaan dhaqmi jirin sida ay naftaydu jeceshahay, waxanse u dhaqmayey sida ay suxufi ahaan ummaddu iga filanayso. Cidda aad taageersan tahay niyaddaada ku hayso. Laakiin ilaali shuruucda saxaafadda oo dhexdhexaadnimada iyo run-sheeggu ugu horrayso.
Ugu dambayn waxan Ilaahay ka baryayaa in uu abaaraha innaga soo furto, intii ka qayb gashay gurmadka abaaraha, hadday shacbi tahay iyo hadday xukuumad tahay, ammaan iyo mahadnaqba waan u jeedinayaa.
Send to your friend Related Tafsiirka Quraanka Iyo Karin News + Aayadaha 26 ilaa 37 Soo Jeedintii Sheekh Dirir [Ka Faa'ideysi Wacan] May 29, 2017
Axkaamta Ramadaan Qaybtii 2-aad ..W/Q: Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub - May 29, 2017
[MUUQAAL] Casharkii 2aad Ee Tafsiirka Quraanka Iyo Suuradda Al Baqra Oo Bilow Ah Aayadaha 1 ilaa 25 Sheekh Dirir May 28, 2017
Karin News Oo Idiin Bilowday Casharo Ku Saabsan Bisha Barakeysan Ee Ramadaan Iyo Casharkii 1aad Oo Uu Inoo Marinayo Shee May 27, 2017
[MUUQAAL] Sideen Ku Qaabilnaa Bisha Barakaysan Ee Ramadaan + Sheekh Maxamed Cabdi Umal Oo Umadda U Sharaxaya Qaabka Ugu May 27, 2017
[Gudaha Ka Eeg] Sheekh Aadan Siiro Oo Qaab Adag Uga Hadlay Sheekhii Hargaysa Daka Sixirka Ku Dabiibayay + Xukuumadda Oo May 27, 2017
Murrashaxa Xisbiga KULMIYE Oo Dhambaal Hambalyo Iyo Duco Ah U Diray Qaranka Soomaaliland Iyo Shucuubta Islaamka [Muuqaal May 26, 2017
Fariin ku socota shacabka soomaaliyeed fadliga bisha barakaysan ee ramadaan awgeed May 26, 2017
[WAR DEG DEG AH] Beelaha Reer Yoonis Habar Jeclo Oo Gaashaanka Ku Dhuftay Inaanay Xisbiga Kulmiye Ka Sii Mid Ahaan Dooni May 24, 2017